Ungazisebenzisa njani iinethiwekhi zentlalo ngokukhuselekileyo-Amadoda aneSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Sebenzisa iinethiwekhi zokunxibelelana ngokukhuselekileyo, ngaphandle kokukhathazeka ngokubangela uxinzelelo lwengqondo, yinto ekhathazayo namhlanje kuluntu lwethu. Sigxininisa ukuqhubela phambili kwale teknoloji ngokusebenzisa uthungelwano kwezentlalo ngombandela oxhalabisayo, ngakumbi kubantwana nakwishumi elivisayo, kuba ngamanqaku aphambili kubathintele ekuphuhliseni isenzo sokuqonda Ngokuqhelekileyo.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, oku akupheleli ebantwaneni kuphela, kodwa abantu abaninzi sele bekhulile Baye bandise umlutha wabo besebenzisa iinethiwekhi zentlalo nangaphandle kokugcina indlela ekhuselekileyo yokuphatha. Oku kudala umlutha, ukuxhomekeka kunye noxinzelelo, konke ukulula kweenkcukacha ezithi zenze njengemfuno yokuqala.
1 I intanethi
2 Kuxelwa nini "njengomlutha"?
3 Yintoni ecaphukisayo ngaphakathi kwethu?
4 Iingcebiso zokoyisa iziyobisi kwimidiya yoluntu:
Xa sithetha ngezonxibelelwano zentlalo, izicelo ezinje nge-Facebook, i-Twitter, i-Instagram okanye i-WhatsApp ziza engqondweni. Zonke ziyasetyenziswa njengendlela yokunxibelelana phakathi kwabantu abaqhelekileyo okanye phakathi koluntu olungaziwayo kunye namaqela.
Malunga neepesenti ezingama-50 zabemi behlabathi basebenzisa ezi ndaba kwaye ke ngenxa yoko unxibelelwano lwabo lumi yonke imihla. Kufuneka iqatshelwe ukuba kolu hlobo lokusetyenziswa kubalulekile ukufundisa ngokusetyenziswa ngokuchanekileyo kuba bekwishumi elivisayo, kodwa uninzi aluzange lubenalo oloqeqesho ngenxa yokuphunyezwa ngokukhawuleza kwenkqubo yethu.
Kuxelwa nini "njengomlutha"?
Singasebenzisa okanye singasebenzisi kakuhle ukuphatha kwayo Kuya kufuneka uyazi ukuba ungavavanya njani xa ikhoboka linokusibangela ukuba ekuhambeni kwexesha kungenakulunga, hlalutya apho kukho iziyobisi:
Ukuba into yokuqala oyenzayo xa uvuka kukujonga uthungelwano lwakho lweendaba ukuze ubone iindaba.
Uhlala kwi-intanethi uninzi lwemini. Ezi ntshukumo zikhokelela ekuhlaziyweni rhoqo kwiprofayili yakho, ukunxibelelana nabantu ngemiyalezo okanye ngezenzo ezibhaliweyo, ukupapasha kunye nokufota yonke into eyenzekayo kuwe, kubandakanya eyenzeka kuwe.
Uhlala ujonga ubomi babanye kwaye ubuthelekise nawe, Ukucinga ukuba ayonelisi. Uthanda "phantse yonke into kwaye uhlala usebenza kuyo yonke into epapashiweyo.
Unokukhathazeka Ngaphandle koko ufumana ulawulo lwento owabelana ngayo.
Ukuba awunalawulo lwendawo ekuyo ifowuni yakho okanye uyilibale, Ingakubangela uxinzelelo olukhulu okanye uxinzelelo.
Yintoni ecaphukisayo ngaphakathi kwethu?
Yonke into esiyichazayo apha ngezantsi inika ingxelo ngokubanzi "umlutha", ezinokuchaphazela ukunciphisa ixesha lemisebenzi yakho yesiqhelo, njengokuchitha ixesha elincinci emzimbeni kunye nabahlobo bakho kunye nabahlobo, ukunciphisa imisebenzi yakho yemihla ngemihla njengokutya, ukulala okanye uxanduva kusapho lwakho.
Ngokwengqondo thatha ukusebenza okuchanekileyo nokuqhelekileyo yomntu ngaphakathi komhla wakhe oqhelekileyo. Ukuphathwa gadalala kwezi nethiwekhi zentlalo kunokuvelisa ukubekwa bucala kunye nokungabinamdla kuyo yonke into ekujikelezileyo, inokubangela nokuba nochuku, ukuhlala phantsi okanye ukuphazamiseka kubuthongo.
Le enye idatha inokuchaphazela ulutsha ngakumbi, kodwa inokukhokelela ekushumayeleni ngomngcipheko olinganayo kuye nawuphina umntu: inokuchaphazela a uxinzelelo lweemvakalelo yenza kwaye ucaphukise ukungxamiseka kwizenzo zabo, kwaye unako yehlisa ukudana kwabantu, ngaphandle kokukwazi ukujongana okanye ukujolisa kakuhle ukungathandi okanye iimvakalelo ezinamandla.
Kukho amaxesha athile apho kwiimeko ezahlukeneyo, oku kuxhomekeka kutyhalelwa emgceni, apho abantu Baqhutywa ziintloni ezigqithisileyo ngokuzithoba kokuzithemba kwabo. Abanabo ubomi obuchanekileyo okanye ubomi bosapho, ke olu hlobo lokunqongophala Ithanda iziqendu zoxinzelelo.
Iingcebiso zokoyisa iziyobisi kwimidiya yoluntu:
Kuya kufuneka ujonge uhlobo oluthile lomsebenzi olithatha ixesha lakho elikhululekileyo. Cwangcisa loo mathuba wokuba uza kuqala nini ukuzimela ngaphandle kweselfowuni.
Ngokomgaqo shiya ifowuni yakho iphumle, kwindawo apho ungafikeleli lula. Ungaqhubeka nokuyisebenzisa ukwenza okanye ukufumana iifowuni, kodwa eyona nto iphambili kukunganxibelelani ne-intanethi.
Eli elinye icandelo linzima, kodwa unako phuma kuninzi lweeapps ukunqanda ukufumana izaziso okanye ukungcangcazela, okanye ubuncinci uzame ukubathulisa.
Kufuneka jonga amaxesha anqumama ukuzibophelela ukuze uqaphele iselfowuni, kwaye la maxesha aya esanda ngokwanda. Akukho mntu uthi awunxibelelani kwakhona neenethiwekhi, kodwa kuya kufuneka uphephe ukulandela inkqubo efanayo njengangaphambili.
Ukuba kunyanzelekile ukuba unxibelelane neenethiwekhi zakho ngamanye amaxesha, ungaxhomekeki ekwazini iprofayile yakho, okanye uhlaziyo lweefoto, okanye ukuthatha inxaxheba rhoqo kuzo zonke iintshukumo.
Thatha ixesha lakho ukukhangela iimuvi okanye uthotho kumabonwakude, dibana nabahlobo, funda, wenze imidlalo, udlale isixhobo okanye wenze uluhlu lwazo zonke izinto ezinokukukhuthaza, Ndiqinisekile ngento entle onokuyifumana kwinqanaba lomntu yamava amatsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Ungazisebenzisa njani iinethiwekhi zentlalo ngokukhuselekileyo